MAALIYADDA SHAQADA - FOREXFUNDS.COM
La xiriir ForexFunds.com
Ku saabsan ForexFunds.com
Feejignaanta Lataliyeyaasha Ganacsi ee Forex
Blog -ga ForexFunds.com
HAGAHA LOOGU TALAGALAY DHAQAALAHA FARSAMADA IYO Maalgashiga
You are here: Bogga ugu weyn
Hadda waa waqtigii ugu fiicnaa ee lagu maalgeliyo Maalgelinta Forex. Sababtoo ah suuqyadu aad bay u sarreeyaan isku xiran, waligeed kama sii dhib badnaan ama caqabad badan in la dejiyo faylalka tacliinta kala duwan. Maalgashiga sanduuqa Forex ee si wanaagsan loo maareeyay ama koontada lacagta lagu maareeyo ayaa wax ka beddeli karta dhaqdhaqaaqyada xun ee suuqyada caalamiga ah iyo suuqyada. Sidoo kale, badeecadaha Forex ee la maareeyay waxay bixin karaan waxsoosaar muhiim ah marka suuqyada kale ay marayaan meel hoose isbeddel la'aan caadooyin In kasta oo isbeddelku keeni karo khatar, haddana wuxuu furi karaa abaalmarinno muhiim ah.
MAXAA LOOGU SOO QAADAY MAALGASHO WAAN AQOONSANAHAY SIDA LOO ISTICMAALO
Lacagta Forex waxay maamushay barxadda ganacsiga koontada.
Sida a faylalka tacliimeed ee kala duwan wuxuu ka kooban yahay hanti kala geddisan, istiraatiijiyad, fasallo hantiyeed, iyo noocyo kala duwan oo maalgashi iyo aalado, marka waa inay isweydaarsiga lacagaha qalaad.
Ganacsatada leh miisaaniyadaha lacagaha ee muhiimka ah ee Forex waxay lahaan karaan koontooyin badan, oo leh qaabdhismeed kaladuwan sida kor lagu xusay, marka lagu daro is-ganacsiga iyo socodsiinta aalado ganacsi oo otomaatig ah ama iskeed u gaar ah.
Xisaabaadka Lacageed ee la Maamulay guud ahaan macnaheedu waa in maal-galiye u oggolaado maareeyaha lacagta inuu ka ganacsado koontada Forex ee maalgashadaha, oo lagu qabto magaca maal-gashiga iyo doorbid ahaan dallaal sharciyeysan. Oggolaanshaha ganacsiga waxaa lagu bixiyaa awood xadidan oo qareen (POA), taas oo kaliya u oggolaaneysa ganacsiga (maahan lacag-bixin ama deebaaji) maareeyaha sanduuqa illaa laga helo rukhsadda noocaas ah ama maal-gashadaha uu ka baxo.
Maalgashadayaashu waxay jecelyihiin joogtaynta waxqabadka. Waxqabadka la saadaalin karo ayaa ah astaamaha ugu muhiimsan ee diiwaanka raadraaca ee maareeyaha maalgelinta Forex. Ka soo qaad in rikoodhka ganacsadaha sarrifka lacagaha uu ka leexday waxqabad taariikhi ah. Xaaladdaas, maalgashadayaasha ayaa laga yaabaa inay ka walwalaan in habka ganacsadaha uu isbeddelay ama uusan sii shaqeyneynin, taas oo laga yaabo inay ku dhiirrigeliso maalgashadayaashu inay soo furaan dhammaan ama qayb ka mid ah lacagtooda. Maalgashadayaasha khibradda leh ee Forex waxay fahmeen in rikoor dheer oo wadata soo noqnoqoshada sanado badan aysan hubin natiijooyin isdaba-joog ah oo faa'iido leh mustaqbalka; sidaas awgeed, maal-gashadayaashu waa inay had iyo jeer la socdaan waxqabadka ganacsatadooda oo ay barbar dhigaan natiijooyinka taariikhiga ah. Dib-u-eegista waxqabadka taariikheed ee ka dhanka ah soo-celinta waqtiga-dhabta ah waa inay qayb ka noqotaa maalgashadayaasha guud ahaan taxadarka baaritaanka geedi socodka.
GO'AANO ADAG OO SAHAN
Waxaa jira arrimo kale oo badan oo kala geddisan, oo tiro iyo tayoba leh, oo ku habboon khuseeya maalgashadaha si uu u baaro cidda laga yaabo inay furayso xisaabta ay maamusho Forex ama ay ku maalgelinayso sanduuqa maareynta lacagaha.
Maalgashadu wuu kala duwanaan karaa isagoo abuuraya faylalka weyn ee Forex ama soosaarida faylalka hantida badan halkaas oo lacagta Forex ay u adeegi doonto mid ka mid ah maalgashadayaasha Shisheeyaha Dibadda. Maareynta Forex waa inaysan aheyn mid dhexdhexaad u ah maal-gashiga maal-gashiga oo dhan. Tani waa inay run noqotaa iyadoon loo eegin qaddarka doollar ama inta ay le'eg tahay sanduuq ku jira Maaraynta Hantida (AUM). Taabadalkeed, waa inay matashaa boqolkiiba saamiyada maalgashaduhu u qoondeeyo inuu kaladuwanaado iyadoo la tixgelinayo faa'iidada / halista suurtagalka ah.
Xisaab furidda iyo maalgalinta xisaabaadka maalgalinta MAXAA XIGA MAXAAN KA FILAYAA IN AY SOO GASHO Maalgashi?
Inta badan tikniyoolajiyadaha ku shaqeeya tiknoolajiyada tooska ah ee 'Forex Forex' ee ka hawlgala xukunno sharciyeysan ayaa bixiya barnaamijyo iyo adeegyo gadaal xafiiska loogu talagalay xirfadleyda maareynta sanduuqa FX iyo macaamiishooda. Si kastaba ha noqotee, ma ahan dhammaan lacagaha lacagta ah in laga heli karo dhammaan dallaaliinta. Halkan waxaa ku yaal tusaale mala awaal ah: ABC Forex Fund waxaa laga yaabaa inay kaliya ku nadiifiso meheraddooda iyada oo loo marayo Big Forex Broker, laakiin maaha iyada oo loo marayo Best Forex Broker; sidaas awgeed, macmiil doonaya inuu koonto ka sameysto ABC Forex Fund waa inuu koonto ka furaa Big Forex Broker si uu u helo maareeyaha sanduuqa.
Marka la doorto dillaalka Forex, koontada ayaa la furi doonaa oo la maalgelin doonaa. Marka xigta, bixinta dukumiintiyada waxaa dib u eegi doona oo saxiixi doona maalgashadaha. Awoodda qareen ee xadidan (LPOA) waxay u baahan doontaa inuu saxiixo maalgashadehu si uu u siiyo maareeyaha ganacsiga Forex rukhsad uu kaga ganacsado koontada. Maalgashadahu waa inuu hadda helaa marin-u-helidda waqtiga dhabta ah bayaannada faa'iidada iyo khasaaraha iyo dhammaan warbixinnada maalinta-dhamaadka ah.
Raacida Sanduuqa Forex Kadib Sameynta Maalgashiga.
The meel maalgashi loogu talagalay sanduuqa waxaa ku jiri kara bartilmaameedyo maalinle ah, toddobaadle, bille ah, ama sannadle ah. Iyadoo la raacayo, waxqabadka sanduuqa waa in dib loo eegaa xilliyo si loo go'aamiyo haddii waxqabadka uu la jaan qaadayo filashooyinka bilowga ah ee maalgashadaha. Tani waa qaab jawaab celin xasaasi ah oo loogu talagalay maalgashadayaasha si ay u sheegaan haddii maalgashigu uu la jaan qaadayo filashooyinka bilowga ah.
Haddii waxqabadka sanduuqa uusan la jaanqaadin taariikhdiisa taariikhiga ah ama mala-awaalka ah, maal-galiyaha waa inuu la xiriiro maareeyaha sanduuqa si uu u waydiiyo sababta ay wax uga beddeleen waxqabadka. Sababaha suurtagalka ah ee soo noqoshada taariikheed aysan ula jaan qaadi doonin soo noqoshada hadda waxaa ka mid ah isbeddel xagga suuqa ah ama dhacdo siyaasadeed oo lama filaan ah. Haddii maal-gashuhu uusan ku qanacsanayn sharraxa maareeyaha sanduuqa ee ku saabsan waxqabadka, maal-gashadehu waa inuu ka fiirsadaa hoos u dhigidda maal-gashigiisa ama uu maal-gashigiisa gabi ahaanba kala soo baxaa sanduuqa Forex.
HELO MACLUUMAAD DHEERAAD AH
Maalgalinta Muhiimka ah iyo Xisaabaadka Lacageed ee Maareysan: Istaraatijiyadaha Maalgelinta Hal abuurka
Maalgelinta fikirka ayaa oggol… [Akhri wax dheeraad ah...]
Waxaa suuro galiyay
Ku noqo bogga sare
Xuquuqda daabacaadda © 2022 · Qiyaas on Qaab-dhismeedka Bilowga · WordPress · Log in